Socdaal keli ah ama koox abaabulan - midkee ayaan doortaa? | Safarka Absolut
Socdaal keli ah ama koox abaabulan?
Weligaa ma is weydiisay haddii socdaal kaligiis ama koox abaabulan? Waa hagaag, waa in la yiraahdaa waa su'aal aan had iyo jeer fududeyn in laga jawaabo. In kabadan waxkasta maxaa yeelay dhexdeeda waxaan kaheleynaa laba ikhtiyaar oo gebi ahaanba ansax ah iyo faa'iidooyinkooda iyo waliba qasaarooyinkooda.
El safarka Kaliya waxay noqon kartaa khibrad laakiin ku safridda koox abaabulan ma ahan wax aad uga fog. Sidaa darteed, markaan shaki ka qabno, waxaa ugu wanaagsan inaan falanqeyno dhammaan qodobbadiisa muhiimka ah, ka hor inta aannaan qaadan go'aanka ugu dambeeya. Ma dooneysaa inaad go aansato hal mar oo dhan? Waxaan leenahay xalka!
1 Socdaalka kaligaa: Faa'iidooyinka iyo qasaaraha weyn
1.1 Faa'iidooyinka safarka kaligaa
1.2 Faa’iido darrooyinka safarka kaligaa
2 Ku safrida koox abaabulan: Haa mise maya?
2.1 Faa'iidooyinka safarka koox koox
2.2 Faa’iido darrooyinka safarka koox koox
3 Socdaal keli ah ama koox abaabulan?
Socdaalka kaligaa: Faa'iidooyinka iyo qasaaraha weyn
Faa'iidooyinka safarka kaligaa
Shaki la'aan, mid ka mid ah faa'iidooyinka waaweyn ee safarka keligaa waa inaad leedahay xorriyad aad u badan go aan ka gaadho. Dhinac, marka laga hadlayo jadwalka iyo dhinaca kale, sidoo kale meelaha aad booqanayso. Sababtoo ah xitaa haddii aad qaadatid wax badan ama ka yar waxaad qorsheyneyso inaad sameyso, qorshooyinka marwalba waa la beddeli karaa daqiiqada ugu dambeysa tanina waxay ku siinaysaa xorriyaddaas aan soo sheegnay. Intaa waxaa sii dheer, maadaama wax walba ay ku shaqeeyaan koontadaada, waa run inaad badbaadin karto lacag fiican markaad dooranayso meesha aad u socoto, abaabulka safarka laftiisa, hudheelada, iwm.
Faa’iido darrooyinka safarka kaligaa
Dad badan oo qaba caado u safridda kaligaaMa lahan cillado sida oo kale. Laakiin haddii ay tahay inaan soo bandhigno wax uun, waa inaynu abaabulnaa safarka oo dhan. Markaa waxay noqon kartaa qaybta ugu dhammaystiran. Maaddaama ay naga qaadaneyso waqti dheeri ah iyo laga yaabee, mararka qaarkood xitaa waxaan ku khaladnaa xulashada hudheelka ama waxqabadyada qandaraaska qaarkood. Laakiin markii 'faahfaahinta' noocan oo kale ah dhacdo sidoo kale waa sheeko lagu daro nolosheena. Dad badan, kali ahaanshuhu sidoo kale waa dagaal kacsan markii xoogaa dhibaato ah ay dhacdo, maadaama aanan heli doonin caawimaad.
Ku safrida koox abaabulan: Haa mise maya?
Faa'iidooyinka safarka koox koox
Mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn waa taas waxaad la kulmi doontaa dad cusub, sidaas darteed sidoo kale waxay noqon doontaa mid ka mid ah daqiiqadaha ugu fiican safarka. Dhinaca kale, haddii aad u safarto waddamo kale oo luqaddu dhib ku noqon karto, kooxdu sidaa sii ahaan mayso. Sababtoo ah had iyo jeer waxaa jiri doona hage ama isku-duwaha safarka la sheegay oo wax walba daryeelaya. Haddii kale, asxaabtaada dhexdooda, hubaal waxaa jira qof isdifaaca. Waxaad heysataa nabadgelyo badan, maadaama haddii wax waliba si habsami leh u socdaan, ama haddii dhibaato timaado, marwalba dad baa kugu wareegi doona. Marka labada xaaladoodba, waxay noqon kartaa inay wax walba fiican yihiin. Sidoo kale, maxaa ka qurux badan wadaagista daqiiqadaha waaweyn ee nolosheena? Dhanka kale, waa inaanan ilaawin inaanay ahayn inaanu abaabulno waxna ay tahay waqti iyo madax xanuun aan badbaadino. In kasta oo laga yaabo in safarka noocan ahi uu ku xidhan yahay fikradda ah in loogu talo galay dadka waaweyn oo keliya, haddana wax run ah kama sii jiraan, maadaama oo ay sii kordhayaan dhallinyaro iyaguna bilaabaya.
Faa’iido darrooyinka safarka koox koox
Inta badan, mid ka mid ah kuwa waaweyn Faa’iido darrooyinka ku safraya koox abaabulan waa inaad u hogaansantaa jadwalka iyo booqashooyinka ku jira 'qorshaynta' oo dhan. Marka dad badan ayay xoogaa culeys ku tahay inaad waqti cayiman ku qaadato markaad rabto inaad aad uga sii badato. Mararka qaarkood qodobbada qaarkood ee maalinta ayaa gaabis ah. Sababtoo ah isku mid maahan in la abaabulo 30 qof marka loo fiiriyo laba kaliya. Sidaa awgeed, arrinta jadwalka waa mid ka mid ah faa'iido darrooyinka kiiskan. Ma jiri doono waqti lagu hagaajiyo sidoo kale, waxaan la joogi doonnaa dadka da 'kasta leh. Markaa had iyo jeer waa inaad la qabsataa dhammaantood. Marka lagu daro xaqiiqda ah in safarka noocan ahi badanaa qaali yahay maxaa yeelay waxaan la soconnaa wax kasta oo horeyba loo abaabulay taasna macnaheedu waa bixinta 'kuwaas dheeriga ah'
Ka dib markaad aragto labada ikhtiyaarba si gooni gooni ah oo aad ku darto faa'iidooyinka iyo sidoo kale faa'iido darrooyinka, waxna ma jecla xisaabtanka. Way cadahay inay had iyo jeer ku xirnaan doonto mid kasta baahidiisa. Sababtoo ah haddii aad doorbideyso inaad waxyar kayar bixiso laakiin iska ilow abaabulka, iibsashada tigidhada iyo sii qabsasho, markaa waxa ugu fiican waa kooxda abaabulan. Dabcan, waayo aragnimo nololeed, laga yaabee inaad kaligaa safarto had iyo jeer waa ikhtiyaar wanaagsan. Intaas waxaa sii dheer waxaad dooran kartaa inaad hagaajiso oo aad dejiso jadwalka kaligaa adigu go'aansato.
Sidaad aragtay, ma awoodno kugula talinaynaa inaad kaligaa safarto ama aad abaabusho koox abaabulan, maxaa yeelay waxay had iyo jeer ku xirnaan doontaa dhadhankaaga ama baahidaada. Laakiin waxaan kuu sheegi karnaa taas, ugu yaraan hal mar, isku day labada ikhtiyaar. Sababtoo ah labadaba waxaad ka heli doontaa faa'iidooyin si fiican ugu habboon in lagu raaxeysto. Haddii waxyeello soo muuqato, markaa hubaal waxaan sidoo kale awoodi doonnaa inaan ku xallino si ka waxtar badan. Keebaadse dooran lahayd?
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Socdaal keli ah ama koox abaabulan?
Sidee bay ahaayeen caadooyinkii Mayaanku